'लेखेर राख्नुस्, साँच्चिकै वाह ! पोखरा हुनेछ, हिजोको कथा दोहोरिन हामी दिन्नौं' :- मेयर आचार्य • Nepal's Trusted Digital Newspaper'लेखेर राख्नुस्, साँच्चिकै वाह ! पोखरा हुनेछ, हिजोको कथा दोहोरिन हामी दिन्नौं' :- मेयर आचार्य • Nepal's Trusted Digital Newspaper
व्यापारिक समूहलाई प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा सुम्पिने, व्यावसायीकै स्वार्थअनुसार नीति बनाउनेजस्ता काम भए भनेर पोखरामा यसअघि निकै विरोध पनि भए, व्यापारिक स्वार्थकै कारण ठूलो राजश्व पनि महानगरबाट गुमिरहेको छ, तपाईं त झन् व्यापारिक पृष्ठभूमिकै मान्छे !
पाेखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले भन्नुहुन्छ,’ मेयर भएपछि मैले पहिलो पटक यो अन्तर्वार्ता दिएको छु र यसैलाई आधार मानेर भोलिका दिनमा प्रश्न सोध्नुहोला । म विधिभन्दा बाहिर गएर एउटा पनि काम गर्ने छैन । यो मेरो निष्ठाको कुरा पनि हो । लौरो चुनाव चिह्न लिएर मेयरमा उठ्नुभएका स्वतन्त्र उम्मेदवार गनेस पौडेललाई पनि मैले भनेको थिएँ, त्यो लौरो लिएर महानगरको गेट बाहिर उभिनुस् र त्यो लौरो मिडियालाई पनि दिनुस्, हरेक महिना हामीलाई खबरदारी गर्नुस् ।’
गोप्य, अदृश्य खालका कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं । सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई अँध्यारो कोठामा बसेर हस्ताक्षर गर्ने छैनौं । यो पाँच वर्ष हामी कसरी जान्छौं भनेर एक महिनाभित्रै उपमेयर, वडाध्यक्षहरुसहित क्लोज क्याम्प पनि गर्छौं । अबको पाँच वर्ष पोखरा महानगर कसरी चल्छ भन्ने स्पष्ट भिजनका साथ अगाडि बढ्छौं ।’
”हो, म निजी क्षेत्रबाटै काम गरेर आएको हुँ । यहाँ व्यापारी भन्नेबित्तिकै कालाबजारी हुन्, बदमास हुन् भन्नेमात्रै सोंचाइ छ । त्यस्तो होइन । यो समाज बनाउन निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । बुद्ध, यती लगायतका एयरलाइन्स नभएको भए नेपाल एयरलाइन्सले मात्र धान्न सक्थ्यो ? यतिका धेरै हस्पिटल र नर्सिङ होम नभएको भए गण्डकी हस्पिटलले मात्र धान्न सक्थ्यो ? यतिका धेरै निजी स्कुल तथा क्याम्पस नभएको भए पोखराका सरकारीले मात्र धान्न सक्थ्यो ? त्यसैले व्यापारी भन्नेबित्तिकै बायस हुन जरुरी छैन । हामी निजी क्षेत्रका समस्या बुझेर पोखरा नबिग्रने गरी काम गर्छौं, निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्छौं ।”
फेवाताल लगायतका तालहरुका मापदण्डका विषय पनि छन् नि !
‘फेवातालका सन्दर्भमा सयौं प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर दुई वर्षभित्र दिइसक्छौं । फेरि प्रश्न सोध्न नपर्ने गरी टुंग्याउँछौं ।’
अबको पाँच वर्षपछि तपाईंले परिकल्पना गरेको पोखरा कस्तो हो त ?
‘मानिसको जीवनस्तर उकास्ने र पोखरेलीको भान्छा कसरी सस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । सहज ढंगले बाँच्नका लागि चाहिने आवश्यकता पूरा गर्नतिर लाग्ने छौं ।’
‘पाँच वर्षमा पुग्दा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेका छौं । अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँछौं । पाँच वर्षपछि पोखरा सुन्दर भएको देख्छौं, हरियाली देख्छौं । सफा देख्छौं । त्यो सँगसँगै हाम्रा सम्पदाहरु व्यवस्थित भएका हुनेछन् । पोखरा महानगरपालिका सिस्टममा चलेको हुनेछ, कुनै पनि काम गर्न जाँदा रेकर्ड तुरुन्त पाइने हुने छ । बिगतमा भएका कमी कमजोरी हटाउँछौं ।’
‘अहिलेको महानगरको कार्यालयले नधान्ने भएकाले पाँच वर्षभित्रै महानगरको अर्को नयाँ भवन हुने छ । पोखरा महानगरका जुनसुकै ठाउँमा मानिसले महानगरको सुविधाको महसुस गर्ने छन् । संघ, प्रदेश र पोखरा महानगरले सहकार्यमा काम गरिरहेको हुने छ ।”
‘पोखराको बसपार्कलाई सिटी बसपार्क बनाउँछौं । त्यहाँको सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्छौं । सबै वडाहरुमा बेलुका ६ बजे पनि गाडी चल्ने बनाउँछौं । तनहुँ, बागलुङ र स्याङ्जातिरबाट प्रवेश गरेदेखि नै वाउ पोखरा ! भन्ने बनाउँछौं । विशेष ढंगले सौन्दर्यीकरण गर्छौं ।’
‘लामे आहालमा मुख्य बसपार्क बनाउने यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ । त्यसको नजिकै अटो भिलेज पनि बनाउँछौं । पोखरामा जति पनि वर्कसपहरु छन्, व्यवस्थित रुपमा राख्छौं । रिङरोडको विषय पनि टुंगो लागिसकेको हुन्छ । लेखेर राख्नुस्, साँच्चिकै वाह ! पोखरा हुने छ । हिजोको कथा दोहोरिन हामी दिन्नौं ।’